कस्तो आउँदै छ सहकारी विभागको एकीकृत निर्देशन ? :: Sahakari Akhabar
कस्तो आउँदै छ सहकारी विभागको एकीकृत निर्देशन ?
काठमाडौं । सहकारी विभागले स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै एकीकृत निर्देशन ल्याउने तयारी गरेको छ । जेठ १० गतेसम्म नयाँ निर्देशन जारी गर्न विभागले गृहकार्य गरेको छ । नयाँ निर्देशनका लागि विभागले मंगलबार सहकारी अभियानसँग छलफल गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बा, नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेललगायत छलफलमा पुगेका थिए । विभागले निर्वाचनपछि सहकारी अभियानसँग एक चरण छलफल गरेर निर्देशनको खाकालाई मुर्तरुप दिने तयारी गरेको विभागका उपरजिष्ट्रार खिमानन्द आचार्यले बताए ।
विभागले फागुन १ गते नै एकीकृत निर्देशन ल्याएको थियो । तत्कालीन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारी सरुवा भएर जाँदाजादैँ ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै नयाँ निर्देशन ल्याउने उद्घोष गरेका थिए । उनले कार्यभार सम्हालेको तीन पुगेसँगै पूरानो निर्देशन खारेज गरेर नयाँ निर्देशन ल्याउन लागेका हुन् ।
विभागका अनुसार संस्था दर्ता तथा सदस्य केन्द्रीयता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति÷उपसमिति तथा साधारण सभा, बचत तथा ऋण परिचालनका विषय समेट्ने तयारी छ । त्यस्तै कोष बाँडफाँड, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण लगायतका क्षेत्रमा निर्देशन जारी गर्ने विभागको तयारी छ ।